विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको दोस्रो इनिङ : आशा र चुनौतीहरु ! « On Khabar
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको दोस्रो इनिङ : आशा र चुनौतीहरु !
अघिल्लो कार्यकालमा उज्यालो नेपाल अभियान सफल पारेको श्रेय लागेका कुलमान घिसिङ्ग एकपटक फेरी आम नेपालीको आशा र ठूला चुनौती लिएर दोस्रोपटक नियुक्ती बुझेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा कुलमानले गरेको योगदानको उच्च मुल्याङ्गकन नेपाली जनताले गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले ठूलो चुनौती स्वीकारेर विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो पटक नियुक्ति लिएर आएको बताएका छन् ।
उनले अगाडि थपे, ‘आज मलाई सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ । जनअपेक्षा पनि एक पटक आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो । पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डको क्याबिनेटले नियुक्ति गरेको थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्री सत्ता साझेदार हुनुहुन्थ्यो ।’ आज पहिलेकै जस्तो सत्ता गठबन्धन भएको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतको संयुक्त प्रयासमा आफू प्राधिकरणमा आएको कुलमानको भनाइ छ । उनले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार आफूले प्राधिकरणलाई उचाइमा पुर्याउन काम गर्ने पनि बताए ।
‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी दिएको र मन्त्रीज्यूले दिएको निर्देशनअनुसार ऊर्जा क्षेत्रलाई हाइटमा लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु’, उनले भने।
घिसिङले आफूलाई सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको र यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई पनि ४ वर्षकै लागि ऊर्जा आयोगमा सम्मानजनक हैसियतमा पठाइएको बताए ।